Cirridka dabiiciga ah - caanobooraha MgAl2O4 - Nidaamka dhejinta qallalka - Video
Isticmaalka dabiiciga ah
Ka iibso bakteeriyada dabiiciga ah dukaankeena
Spinel waa xubinta aluminium magnesium ee kooxda weyn ee macdanta. Waxay leedahay qaabka MgAl2O4 ee nidaamka kiilemka dhoobada. Magaciisu wuxuu ka yimaadaa Latin-ka "spina". Balas Ruby sidoo kale waa magac hore loogu talagalay noocyo kala duwan oo lafdhabarta ah.
Spinel wuxuu dhalaalayaa nidaamka isometric. Foomamka kareemka ee caadiga ah waa octahedra, badanaa labeen. Waxay leedahay qayb ka mid ah cidhib-tirka aan fiicnayn iyo sidoo kale jab-xirka. Hardness waa 8, culeyskiisa gaarka ahi waa 3.5 ilaa 4.1. Inkasta oo ay tahay mid cad oo aan caddayn kufadhig ah oo aan ciriiri lahayn. Waxay noqon kartaa mid aan midab lahayn. Laakiin inta badan waa midabyo kala duwan oo casaan, aso kacsan, casaan, buluug, cagaaran, jaale, madow, madow, ama qalin. Waxaa jira nuuc dabiici ah oo cad oo dabiiciga ah. Hadda waa la waayay, taas oo si kooban uga muuqata waxa hadda Sri Lanka.
Isbaarooyinka casaanka casriga ah waxaa loo yaqaan 'spinel-rubies' ama baalshaha buluuga ah. Waagii hore, kahor imaanshihii sayniska casriga ah, isbiirtooyinka iyo moobaha ayaa si siman loo yaqaan 'rubies'. Ka dib qarnigii XNUM, waxaanu isticmaalnaa ereyga "ruby", oo ah noocyada casriga ee korundum macdanta kaliya. Ugu dambeyntiina, fahmeen farqiga u dhexeeya rubaan iyo lafdhabarta.
Waxaa muddo dheer laga helay dhagax dhuxul-dhagax ah ee Sri Lanka. Iyo sidoo kale ku yaalla gobolka Badarshan ee gobolka Banaadir, Alqo iyo Mogok ee Burma. Dhowr dhagaxyo tayo leh ayaa sidoo kale laga helay maraakiibta Luc Yen, Vietnam. Mahenge iyo Matombo, Tansaaniya. Shirkadda Tsavo, Kenya iyo shuftada Tunduru, Tansaaniya. Iyo sidoo kale Ilakaka, Madagascar. Spinel waa macdan metamorphic ah. Iyo sidoo kale macdanta aasaasiga ah ee mafrka yar ee dabaylaha aan caadiga ahayn. Dhagaxyadaas aan dabiiciga aheyn, macmacaanku waa mid aad u liidata alkalis marka loo eego aluminium. Iyo qoryaha aluminiumku waxay u noqon karaan corundum macdanta. Waxay sidoo kale ku dari kartaa jooniska si ay u sameeyaan lafdhabarta. Tani waa sababta aan u badinay si wadajir ah. Waxaa jira dood ku saabsan dhirta saliidda ee dhagaxyada mafic ah. Laakiin dhab ahaantii waxa ay ka dhalataa isdhexgalka maafikada ee magma-qabad leh magma ama isbaaro badan.
Muuqaal jilicsan oo ka yimaada Mogok, Myanmar
Red Spinel ee marble ka Mogok, Myanmar